မြန်မာသံရုံး၊ မော်စကိုမြို့မှ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၁) ကြိမ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
မြန်မာသံရုံး၊ မော်စကိုမြို့မှ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၁) ကြိမ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ
(၂-၂-၂၀၁၉ ရက်၊ မော်စကိုမြို့)
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ မော်စကိုမြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးက ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၁) ကြိမ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားကို မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကိုကိုရှိန်နှင့် ဇနီး ဦးဆောင်၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်၊ ဒေသစံတော်ချိန် ၁၈၀၀ နာရီမှ ၂၀၀၀ နာရီအထိ မော်စကိုမြို့၊ မြန်မာသံအမတ်ကြီးနေအိမ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားသို့ ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Igor Morgulov က Guest of Honour အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများဦးစီးဌာန၊ အာရှနှင့် ပစိဖိတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၊ တတိယ အာရှရေးရာဦးစီးဌာနတို့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ရုရှားစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ သံတမန်များ၊ ရုရှား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ စစ်သံမှူးများ၊ ရုရှား-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်းမှ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရုရှား-အာဆီယံ စီးပွားရေးကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အာဆီယံစင်တာမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ မော်စကိုမြို့ရှိ တက္ကသိုလ် (၁၅) ခုမှ ပါမောက္ခချုပ်များ၊ ရုရှားနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား ပညာတော်သင်ကျောင်းသားများ၊ ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော် များ စုစုပေါင်း (၂၀၀) ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် ရုရှား-မြန်မာ နိုင်ငံတော်သီချင်းများ ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက် မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကိုကိုရှိန်နှင့် ရုရှား ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Igor Morgulov တို့က မိန့်ခွန်းများ ပြောကြားခဲ့ကြ ပါသည်။
အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် ဧည့်သည်တော်များအား အနောက်တိုင်း အစားအစာများနှင့်အတူ မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအစာများ ဖြစ်သည့် ပဲထမင်းနှင့် အမဲသားနှပ်၊ မုန့်ဟင်းခါး၊ မြိတ်ကတ်ကြေးကိုက်၊ ပုသိမ်ဟာလဝါ၊ ရွှေချည်ဆနွင်းမကင်း၊ မြန်မာ့ရွှေဖီဦး လက်ဖက်ရည်တို့ဖြင့် တည့်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အလှအပများနှင့် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများအတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာများကို တီဗီဖန်သားပြင်တွင် ပြသခဲ့ပြီး မြန်မာ့ရိုးရာစောင်းနှင့် တိုးနယား၊ လောကနတ်ရုပ် နှင့် မြန်မာ့ပန်းချီကားများ၊ နံရံကပ် ရွှေချည်ထိုး ကားချပ်များ၊ အလှဆင် ပန်းမန်သစ်ပင်များကို အစားအစာဒီဇိုင်းများဖြင့် ယှဉ်တွဲပြသခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။